MIYUU SUURTOGAL AH IN LA SIIYO QOLOFKA DIGAAGGA: MAXAY TAHAY ISTICMAALKA BADEECADA SHIMBIRTA - BEERAHA DIGAAGA
Ma suurtogal tahay in la siiyo digaag si ay u dhigaan hilibka digaag ah
In cuntada ee digaagga waxaa jira cunto kala duwan, laakiin waxa ugu fiicani waa in shimbiraha ay ku faraxsan yihiin in ay cunaan qolof ah ee ay ukuntooda, mararka qaarkood iyaga lebbinaya iyaga xaq buul.
Beeralayda digaagga ee khibrada leh xaaladaha noocaas oo kale ah waxay ka hadlaan la'aanta kalsiyum ku jirta jidhka shimbiraha, laakiin haddii ay sidan u buuxsameyso - aynu ogaanno.
Digaagu ma la siin karaa qolofta ukunta?
Ukunta qallalan ee suunka ah ayaa si isku mid ah u faa'iido leh dhalinyarada iyo digaaga labadaba, sababtoo ah waxay haysaa waxyaabo badan oo faa'iido leh. Kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
qolofta ukunta waa bakhaar-yare ah micro-iyo macronutrients, oo ka mid ah magnesium waa meesha ugu horeysa, oo ay raacdo 30 kale oo macquul ah oo macquul ah;
wadajirta qolofka, qadar badan oo calcium ah ayaa gashan jirka shimbiraha, iyada oo laysku halleyn karo kuwaas oo ay jiraan dhibaatooyin aan dhammeystirnayn;
Isticmaalka joogtada ah wuxuu hagaajiyaa muuqaalka shimbiraha, cirridka iyo gagaarka xoojiya;
ukunta cusub waxay noqotaa mid dhumuc weyn, taas oo macnaheedu yahay in shimbiruhu aysan awood u yeelan doonin inay si khatar ah u burburiyaan;
marka la quudiyo digaagga dhalinyarada ah iyo digaagga koray, midna uma baahna inuu ka walwalo habka lafahooda, iyo sidoo kale suurtagalnimada in uu ku dhaco rickets.
Ma taqaanaa? Si aad ukumaha ku sii hayso qaboojiyaha ilaa intii suurtogal ah, markaad u dhigto way ka wanaagsan tahay inaad u soo jeesatid calaamad.
Sida loo siiyo ukunta digaagga
Inta badan kalsiyumka ayaa laga qaataa jidhka digaaga, sababtoo ah waxaa loo baahan yahay in la dhiso qolofta ukunta. Si loo magdhabo luminta hal mar, 3.5 g oo ah walaxda maalintii ayaa ku filan, halka digaagga ama ragga ay qiimahoodu ka kala duwan yihiin 1.1 ilaa 1.3 g. Marka la eego boqolleyda, saamiga ukunta (iyo sidoo kale ilaha kale ee kalsiyum) waa inay noqdaan qiyaastii 5% wadarta guud ee cuntada la siiyo shimbirta.
Waa wax aan loo baahnayn in digaagga laga quudiyo bowdada ama dhulka. Waxaanu kugula talineynaa in aad sameyso digaag digaaga ee digaaga: bunker, gawaarida tooska ah ama kan biiyaha qaada.
Dabcan, ka hor intaan la isticmaalin, waxaa lagama maarmaan ah in si habboon loo diyaariyo, si fiican loo dhaqo oo lagu qaboojiyo foornada illaa shan daqiiqo heerkul ah 100 ° C. Kabaha qalalan waxaa lagu jajabiyey xaalad bur ah (Booqday Furimaha Biyaha), ka dibna waxaa lagu daray cuntada ay soo saartay shimbiraha, si fiican u kareyso. Beddel ahaan, waxaad si fudud ugu daadin kartaa dhaymada weel gaar ah si ay shimbiruhu u qaataan nafaqooyin badan sida ay jidhkooda u baahan yihiin.
Waa muhiim! Marka goosashada qolofta, waxaa lagu talinayaa in si buuxda loo nadiifiyo haraaga borotiinka iyo filinka gudaha, haddii kale waxaa laga yaabaa inay sii xumaato oo ay bilaabaan in ay wax yeelaan.
Qadar calcium ah oo jirka ku jira ayaa ah mid aan loo baahnayn sida ay yar tahay, markaa, marka la siinayo qolofta la jajabiyey ee digaagga, waxay u qalantaa in la raaco xeerkan. Xaddiga xad-dhaafka ee cutubkan ku jira bini-aadamka avian wuxuu kicin karaa xadgudub ku saabsan marinka dareen-celinta ee maskaxda muruqyada ama muuqaalka dhagaxyada xubnaha jirka. Sidaa daraadeed, marka la isticmaalo qolofada waa inay xaddidaa qaadashada kalsiyanka ilaha kale.
Maxaa kale oo quudin kara digaagga
Digaagga way cuni karaan inta badan mashiinka cuntada ee miiskaaga, laakiin inaad iska ilaaliso khalkhalka dheefshiidka shimbiraha, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid waxa iyo inta cuntada loo isticmaalo. Tixgeli fursadaha ugu caansan ee cuntooyinkaas.
Xilliga jiilaalka, digaagga ma laha cagaar ku filan. Si loo dheellitiro cuntadooda xilliga qaboobaha, waxaan kugula talinaynaa inaad ku quudiso shimbiraha leh jeermiska qamadiga ah.
Baradhadu waxay noqon doontaa mid aad ugu habboon cuntada diinta, maaddaama ay si deg deg ah u cufanayaan jirkooda iyo dib u buuxinta kaydkooda fiber. Intaa waxaa dheer, alaabtan waxaa lagu qasi karaa wax quudin ah, sababtoo ah nooc kasta oo shimbir ah waa mid aad u fiican in la cuno. Waxa kaliya ee la tixgeliyo marka la soo saaro baradhada - muuqaalkiisa: alaabta ceeriin ah ma aha oo keliya oo aan loo baahnayn, laakiin waxay noqon kartaa khatar ah caafimaadka shimbiraha. Xaqiiqdu waxay tahay in booska subcutaneous ee xididka ay ka kooban tahay tiro badan oo ah walxaha sunta ah ee solanine, burburay kaliya by saameynta heerkulka sare. Sidaa darteed karkariyo barandhada dabka, waxaad ka saari kartaa suurtagalnimada inaad sumawdo shimbirta. Baradho la karkariyay waxay noqon doontaa mid aad u fiican oo isku darka ah, cawska cagaaran ama mashiin qoyan, iyo sida qiyaasta saamiga, waxay ku xiran tahay da'da shimbirta: Digaagga saddexda toddobaad ah waxaa la siiyaa 60-100 g oo baradho ah maalintii, wax yar ka dibna waxay keenaan 200 g on 1 shimbir qaangaar ah. Si kastaba ha ahaatee, tan micnaheedu ma aha in digaagga ay cunaan baradhada maalin kasta, laba ama saddex jeer toddobaadkii waa ku filan.
Ma taqaanaa? Kala duwanaanshaha baradhada ugu qaalisan adduunka waa La Bonnotte, dhadhan aad u jilicsan. Qiimaha 1 kg ee sheygan wuxuu gaarayaa 500 doolar.
Digirta - ilaha ugu fiican ee borotiinka, taas oo si weyn u hagaajineysa tayada ukunta, iyo caafimaadka shimbirta lafteeda. Si kastaba ha noqotee, dhammaan shimbiruhu ma ogolaanayaan inay cunaan cayriin, ka hor intaan soo saarin way ka wanaagsan tahay inay karkariso. Nidaaminta karinta waa mid fudud oo ku lug leh barbaro saacad nus ah iyo cunto karis ah oo ka baxsan kuleylka hooseeya waqti isku mid ah. Waxyaabaha la karkariyey way sahlan yihiin in lagu dhajiyo jidhka avian mana keeno calool xanuun. Digirta caanaha waxay bixisaa oo kaliya la jarjarey, loona doorbidayaa in lagu daro bur. Marka la eego xaddiga arrinka, waxay sameyn kartaa raashin iyo in la bixiyo dhowr jeer maalintii, 1-2 jeer toddobaadkii. Sida baradhada, digirta la kariyey waxaa lagu qasi karaa digirta caleenta, waxaa lagu daraa isku darka badarka ama ku rid dhismaha digaagga ee marin gooni ah.
Kalluunka iyo kalluunka waxaa lagu magacaabi karaa nooca digaaga ah, taas oo shimbiruhu cunaan raashin. Si kastaba ha ahaatee Iyadoo la tixgelinayo joogitaanka lafaha badan ee ku jirta, waxaa lagugula talinayaa inaad karkariso ka hor inta aanad bixin, illaa inta dhammaan qaybaha adag ee la jilciyo.
Waa muhiim! Kalluunka loo isticmaalo quudinta waa in uu ahaado mid cusub, haddii kale suurtogalnimada saameynta xun ee shimbirta jirka aan laga saari karin, taas oo ugu horreyn ka muuqata xanuunka mindhicirka iyo caloosha.
Kalluunka waxaa ku jira xaddi badan oo ah fosfooraska iyo kalsiyum, taas oo saameyn togan ku leh habka lafaha ee shimbiraha iyo xoogga ukunta. Si kastaba ha noqotee, inta badan soo saarka "suxuunta kalluunka" waa inaanay ka badan 1-2 jeer usbuucii, iyadoo la isticmaalayo 100-150 g oo kalluun shiidan oo isku qasan. Lacagtaas waxaa la siin karaa waqti, waxaana loo qaybin karaa dhowr nafood inta lagu jiro maalinta.
Caleemaha kaabash - mid ka mid ah noocyada ugu jecel cuntada ee digaagga gudaha. Waxay si fiican u cunaan qaab isku jajaban, oo si tartiib tartiib ah madaxa ujoogsada. Intaa waxaa dheer, khudradda waxaa la soo saari karaa feathery iyo foomka pickled, waxa ugu muhiimsan waa in pre-deefin iyo tuujin, ka takhalusi cusbo xad-dhaaf ah. Kaabashka wuxuu hindhiciraa waxyaabo waxtar leh sida potassium, magnesium, kalsiyum, birta, iyo waliba fiitamiin A, C, K. Inta lagu jiro halsano ee sauerkraut, acid lactic faa'iido leh ee caloosha shimbir u muuqdaan, si weyn u hagaajinayaan hababka dheefshiidka. Caleemaha la jarjaray ee la jarjaray ayaa lagu dari karaa miisaanka (qiyaastii 100-150 g halkii 1 kg) ama waxaad ku dari kartaa madaxyada guriga oo sug ilaa inta digaagga ay cunaan caleemaha, ka hor intaysan gaarin madaxa.
Akhri sida loo cuno digaagga toonta, basasha, miraha gabbaldayaha, xididdo, miro, milix, digir.
Kaliya cuntooyin kala gedis ah oo si siman u dheellitiran waxay xaqiijin karaan caafimaadka wanaagsan iyo waxtarka sare ee shimbirahaaga, sidaas darteed labada qolofka ukunta, kaabajka, baradhada, iyo digirta tiro go'an oo waa in la quudiyo digaagga.
Video: Sida loo siiyo ukunta digaagga
Waxaan siin karnaa digaagga qolofta labada ukun cayriin iyo la kariyey. Waxa ugu muhimsan ee qaawan, oo aan si buuxda u siin. Digaagga oo cunaya qolof aan bannaanayn, ka dibna jooji ukumaheeda.